Ahoana no fomba hananganana rindran-damina amin'ny 2018?
Ny tsena dizitaly dia sehatra tsy azo ovaina izay ahafahan'ny algorithm vaovao manova ny fitsipika lalao. Amin'ny maha-tompon'ny tranonkala azy dia tokony hahafantatra ianao hoe inona no ilainao hanangana rindran-damina amin'ny taona 2018 manaraka. Ny tricks izay hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity dia afaka manampy anao hahatratra ny laharana ambony kokoa raha tsy miezaka manatratra ireo tompon'ny tranonkala manantena ny hahazo loharanom-baovao hafa.
Toa efa hifarana ny taona. Amin'izao fotoana izao, mba hahazoana rohy mila mametraka votoaty tsara ianao, dia hahita loharanon-tranonkala ahafahanao mametraka ny rohinao ary mametraka fifandraisana ara-barotra amin'ny tompon'ny tranonkala. Ireo vohikala manerantany toy ny Huffington Post, Forbes ary ny hafa dia mampiasa tetika matihanina, izay tsy ahitan'ny rohy rehetra ataonao. Midika izany fa tsy hampisy dikany ny rohy misy anao satria voamarina fa nofafana izy ireo. Na izany aza, raha ny tena izy, ny rakitra nofollow dia manana ny lanjany amin'ny fomba fijery CTR. Mbola tsy manangana ny pejin-pejin-tsika izy io satria tsy misy jiosy mifandray amin'ny tranonao.
Misy fomba tena ilaina hanamboarana rindran-damina izay dofollow ary manana lanja manan-danja ho an'ny fikarohana karazana fikarohana.
Mamolavola rindran-damina amin'ny Google Docs
Hita fa ny Google Docs dia mety ho fomba tsotra sy mora ahafahana mamerina backlinks. Ny hany zavatra ilainao hahazoana antoka dia ny hizara ny taninao amin'ny vahoaka. Google dia manome lohahevitra manokana amin'ny vokatra ao amin'ny valin'ny fikarohana. Izany no mahatonga ny famoronana soso-kevitra Google miaraka amin'ny backlinks ho an'ny pejy web na ny votoatinao dia hanampy anao hanangona sira mifandraika amin'ny tranonkala iray manan-danja indrindra, dia ny Google. Mila manana teny farafahakeliny 300 ianao ao amin'ny lahatsoratrao. Ampidino ny teny fikarohana mifandraika amin'ny habetsaky ny fikarohana izay tadiavinao hihaona amin'ny votoatinao. Raha vao noforonina ny rakitrao dia mila mandefa ny URL at Google sy Bing ianao.
Mamolavola backlinks amin'ny alàlan'ny Google
Ny vokatra Google hafa mety hanome tombony anao dia ny Google Sites. Manome anao fahafahana mamorona tranokala eo ambanin'ny anaran'ilay marika Google, toy ny Google Docs. Mifanohitra amin'ny Google Docs, ny Google Sites dia manome fahafahana anao hanova ny backlinks. Araka ny fikarohana natao vao haingana dia mampiseho tranokala Google izay mamela ireo tranonkala izay tsy asiana mpifaninana loatra hifanaraka amin'ny valin'ny fikarohana TOP-20. Midika izany fa afaka manana lisitra be ianao ao amin'ny valin'ny Google TOP mifototra amin'ny teny filamatra manokana. Ny laharan-tariby ao amin'ny pejin'ny Google SERP faharoa dia mety hahasarika ny mpanjifa mety ho anao ary hitondra fifamoivoizana sarobidy ao amin'ny tranokalanao.
Fanavaozana ny rindran-damina amin'ny LinkedIn
Izany dia fomba vaovao enti-manangona sira fifandraisana amin'ny site, ary isika angamba no voalohany miteny aminao momba izany. Ity fomba ity dia manome fahafahana anao hanatsara ny fahatsiarovanao ny anaranao momba ny sarimihetsika maimaim-poana. Raha vantany vao tafiditra ao amin'ny LinkedIn ianao dia manome fahaizana mamorona kaonty orinasa. Raha mamorona kaonty fandraharahana ianao, dia mila mametraka azy io amin'ny fomba izay itiavanao ny teny fanalahidinao avo be. Amin'ny maha-rohin'ny LinkedIn anao ao amin'ny Google dia manana fahafahana lehibe ianao hapetraka ao amin'ny toerana dimy SERP voalohany Source .